China High Quality Spring Shock Absorber-Z11069 ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebu ya | TANGRUI
Maka ịkwọ ụgbọ mmiri kwa ụbọchị na ịpụ n'okporo ụzọ, ndị na-atụ ụjọ na-eme ka Jeep gị na-aga nke ọma ma chekwaa nkwụsịtụ ya. Ma ị chọrọ nnọchi, nwelite nkwalite ma ọ bụ mmezi zuru ezu, Tangrui na-enye ọtụtụ ihe ịtụnanya dabara n'ihe dị ka afọ ọ bụla na ụdị Jeep n'ahịa.
Naanị ndị Kachasị mma Ebe a
Dị ka onye na-ebu mmiri, ị maara na injinia dị mma bara uru maka ịgba ịnyịnya kachasị mma, anyị onwe anyị kwa. Akụkụ anyị na-atụ ụjọ si n'aka ndị nrụpụta kacha elu sitere na Pro Comp Suspension na Rubicon Express na Daystar na Bilstein, ha niile nwalere ma gosipụta njikere maka eriri gị. Ejima abụọ, monotube, na ụdị mmiri dị maka ihe ọ bụla ị na-ewere. Maka ihe ndị na-aga n'ihu n'okporo ụzọ, anyị ejirila ihe ijuanya kpuchie gị maka nkwonkwo ebuli elu yana ngwa ngwa maka nkwalite Mee N'onwe Gị.
Naanị Ihe Need Chọrọ
Kachasị nkwusioru akụkụ na ngwa apụtaghị ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na ha anaghị adabara gị rig, ma na Tangrui anyị na-ahụ na ị na-ahụ nri egwuregwu. Akwụkwọ ndekọ aha anyị n'ịntanetị, nke dị ugbu a na ngwaahịa anyị zuru oke na ntanetị na mpaghara, dabara n'ụdị ụgbọ gị ka ọ dabara adaba ma nye gị ozi niile ịchọrọ iji tụnyere, zụta ma wụnye.
Nyefee Ndị Ahịa Anyị
Anyị na-anya isi ọ bụghị naanị na ngwaahịa anyị kacha elu kamakwa na ọrụ dị mma anyị na-enye ndị ahịa. E wezụga ihe ọmụma bara ụba dị n'ịntanetị, ndị ọkachamara anyị na-ewere ajụjụ ọ bụla ị nwere ka ị wee nwee ike ịme mkpebi ị maara banyere ịzụta. N'elu nke ahụ, ngwaahịa ọ bụla e rere na Tangrui na-akwado nkwado egwuregwu azụmaahịa ụbọchị 90. Ọ bụrụ na onye asọmpi na-ere ihe ị nyere iwu maka obere ihe ị kwụrụ, ka anyị mara maka nkwụghachi na ọnụahịa ọnụahịa. Jiri akụkụ ndị dị oke ọnụ, ndị ọkachamara raara onwe ha nye na ọnụ ahịa ndị a na-apụghị imeri emeri, soro anyị zụọ ahịa na ntụkwasị obi zuru oke na Jeep gị dị mma.
Ngagharị Ka Mma
Site na ngbanwe ujo, ụgbọ gị ga-arụ ọrụ karịa ka ọ dị na mbụ ma ị ga-enwe mmetụta dị iche ozugbo ị kụrụ n'okporo ụzọ. You'll ga-ahụ nkwalite dị mma mgbe ị na-agagharị n'okporo ụzọ apịtị, na-ejikwa mmelite ka mma mgbe ị na-agbagharị iyi na-emighị emi na nkasi obi kachasị mma mgbe ị na-awagharị n'okporo ụzọ ndị na-adịghị mma. Maka ịnwegharị ụgbọ elu na-achịkwa nke na-eme ka taya gị na-emetụ ala n'okpuru gị maka ịkpọtụrụ na-aga n'ihu, ịkwesịrị ịma jijiji Jeep iji dochie nke ochie gị, ndị ike gwụrụ ma mee ka ị chịkwaa oche onye ọkwọ ụgbọ ala. Site na nhọrọ anyị dị ukwuu nke ọnụ ụzọ abụọ na ụzọ ụzọ anọ dịnụ dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ dị ka ụzọ abụọ dabere na akara ahụ, ị ​​ga-enwe ịnwekwu njikwa na-arụ ọrụ nke ọma na ndị a na-adịgide adịgide, na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide ogologo oge.
Y’oburu na ichoro onye na-acho ujo maka Jeep ma obu gwongworo, mgbe ahu i biara ebe aka nri. Anyị na-enye nhọrọ site na ụdị kacha mma na ụlọ ọrụ na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri. Ọnụahịa anyị dị ala kwa ụbọchị yana nkwa egwuregwu 100% nkwa na ị ga - echekwa ọtụtụ mgbe ị na - azụ ahịa iji kwalite ma ọ bụ gbanwee ụgbọ gị. Zụọ nchịkọta anyị taa ka ị were uru nke ọnụahịa ndị a dị ịtụnanya ma jiri Jeep gị, ụgbọala gị ma ọ bụ SUV gị na akụrụngwa ịchọrọ iji mee ka ọ na-agba ọsọ na arụmọrụ kacha elu.
Onweghị ihe dịka ịgba ọsọ n'okporo ụzọ na inwe mmetụta maka ebe ị na-aga. Mana nsogbu nwere ike ibilite mgbe ụgbọ gị na-agba mmiri mgbe ị na - agbaji ma ọ bụ na - emegharị gị n'okpuru. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, yabụ oge eruola iji dochie anya ihe ịtụnanya gị ma weghachite gị n'okporo ụzọ. N'ebe a na Tangrui, anyị nwere nnukwu nhọrọ nke ndị na-ama jijiji site na ụdị ndị isi na ụlọ ọrụ ndị dị ka Pro Comp Suspension, King Shocks na Skyjacker iji họrọ ihe ịtụnanya maka ụgbọ ala gị ma ọ bụ onye ọkwọ ụgbọ gị kwa ụbọchị.
.Dị Shock absorber
Akara Maka Mitsubishi, Lancer
Akwụkwọ ISO16949 / IATF16949
Nke gara aga: TangRui Mmiri Shock Absorber-Z11068
Osote: 28313SC010 na 28313SC011 NKỌRỌ AKW ForKWỌ Maka Subaru -Z1253
Shock Absorber kpọchie
6L8Z-30-78AA Na YL823078AA Control Arms For K ...
High Quality sterịn mkpisiaka N'ihi Volkswagen Nwee ...
High Quality N'azụ ekpe ekpe Suspension Mmezi Kit Ca ...
Shock Absorber Rubber, Hood Shock Absorber, Ogige Ulo, Taya Ball Joint, Shock Absorber kpọchie, N'iru n'iru Knuckle,